Wasiirada warfaafinta ee Puntland & Federaalka oo dhaleeceeyey qarixii is-miidaamiska ahaa ee madaarka Adam Cadde ee Muqdisho. – Radio Daljir
Wasiirada warfaafinta ee Puntland & Federaalka oo dhaleeceeyey qarixii is-miidaamiska ahaa ee madaarka Adam Cadde ee Muqdisho.
Seteembar 9, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Sept 09 – Wasiirada warfaafinta ee Puntland C/xakiim A Guuleed iyo Federaalka C/raxmaan M Yariisow ayaa ka hadlay qarixii saaka ka dhacay madaarka Muqdisho, saxaafada iyo xuska munaasabada Ciid al Fidhri.
Nabadoon C/casiis Afgaduud oo aan ka waraysanay dab khasaare gaystay oo qabsaday dhul deegaaneedka Laag, Bari.
Yaa ka danbeeya xariga Agaasimaha Horseed Media? Cabdifataax Jaamac Mire, Agaasimha Horseed Media waxa uu xabsiga magaalada Bosaso ku jiraa muddo 27 cisho ah …